Soo dejisan HyperCam 4.0.1511.06 – Vessoft
Soo dejisan HyperCam
HyperCam – software a functional si ay u qoraan falalka shaashadda. software The u badbaadin karaa mashaariicda diiwaangeliyey, AVI ku Wmv ama qaababka file ASF. HyperCam kuu ogolaanayaa inaad si ay u qoraan video Streaming ah, wadahadalo on Skype iyo maraayay ciyaarta, abuurin bandhigyo video iyo videos tababarka. software The awood si ay u qoraan deegaanka ee la doortay ee shaashadda oo badbaadin shuqullada diyaar tusaha lagama maarmaanka ah. HyperCam ku jira editor ka dhisay-in la set oo ah qalab si astaysto tayada image iyo raacidda dhawaaqa.
Qabsashada deegaanka ee la doortay ee shaashadda
Saves files qaabab kala duwan
Riixo of audio qabtay iyo video
Taageerada hotkeys ah
Comments on HyperCam:
HyperCam Software la xiriira:
Qabashada Screen software The in ay qabsadaan video ka screen oo waxaad ka samaysaa Screenshot ah. software The kuu ogolaanayaa inaad Customize goobaha badan ee qabashada screen baahida user ee.
العربية, English, Українська, Français... Free Video Call Recorder for Skype 1.2.68.831
English, Français, Deutsch, Italiano... EndNote 7.4